Companieslọ ọrụ nyocha ala Ere na mgbazinye na Realtyww Info
Ebiputara site na Invision
nlele Companieslọ ọrụ nyocha ala Bipụtara 4 months ago
Igwe ihe eji eme ala na-egosi ọrụ ọ bụla na-agbanwe ihe ngosipụta nke mpaghara ala, gụnyere: ihe ndị dị ndụ, dịka flora ma ọ bụ fauna; ma ọ bụ ihe a na-akpọkarị ọrụ ugbo, nka na nka nke ihe ọkụkụ na-eto eto na ebumnuche nke ịmepụta gburugburu ebe obibi mara mma. ihe ndị sitere n'okike dịka mbara ala, ọdịdị ala na elu, ma ọ bụ mmiri nke mmiri; na ihe ndị dị ka ihu igwe na ọnọdụ ọkụ. Schọcha ahịhịa na-achọ nka banyere ọrụ ubi na ịkọ ihe.